Dhibanaha aan dhuuman karin ee Hindiya!! | HimiloNetwork
Posted by: Zakariya in Wararka July 8, 2015	0 206 Views
New Delhi (Himilonews) —Tiiyoo dastuurka Hindiya uu meel-adag ka joogo in waalidku tijaabo galiyo uur-jiiftiisa suu u go’aansado nuuca dhallaan ee aan wali dhalan, dhal-doorsiga ilma-ridista ah wuxuu wali fal-guud oo la hirgaliyo ka yahay qeybaha Hindiya oo dhan taas oo dhalisay isku dheelli-tir la’aan u dhaxeysa gabdhaha ku wiilasha.
“Waxaad heli kartaa 2,000 oo dhal-gabdho ah oo uurka jiifta in lagu dhex dilo maalin kasta. Qaar ayaa la dhalaa iyaga oo foolka looga dhigay ereyo lagu ayaan-darreynayo,” Maneka Gandhi ayaa u sheegtay NDTV News.
Tira-koobkii 2011 ee Hindiya ayaa muujiyay heerka isku dhignaanta lab-dhedig uu kor u kacay tan iyo tirakoobkii hore, gabdho aad uga tira yar wiilasha ayaa la dhalay halka tirada gabdhaha ka yar lix-jirka ay hoos ugasii dhacday tirakoobkii laqaaday qarnigii 20aad daba-yaaqadiisa.
Warbixin ay soo saartay Britisha Medical Journal ayaa lagu sheegay in ku dhawaad 12-malyuun oo dhal-gabar ah uurka lagu xabaalay 30—kii sano ee ugu danbeysay taas oo dhalisay koror wiilaleed ka badan gabdhaha 918-g: 1000w sanaddii 2011.
Lab-doorsiga dhaqameed ee caadooyinka Hindiya ayaa wiilasha u arka udub-dhaxaad—nolol kaabayaal qaadi kara qiimaha iyo quudka qoyska iyo xulka lama-huraanka ah ee waalidka—tusmo muhiim u ah diimo badan.
Gabdhuhu, si walba, waxaa aalaaba loo arkaa caqabad ku kallifaysa qoyskeeda inay god u qodaan qoondada guurkeeda si ay hubsadaan dheelaas la go’aansan karo. Dhaqan gudihii u arka in kufka aan la guursan uu yahay ceeb-kugu-hoyatay, waalidku waa iska caadi inuu ka warwaro bad-qabka kufka aan laga guursan.
Gandhi waxay sheegtay in jidaalkii “mashruucii” dowladda ee ahaa “Beti Bachao Beti Padhao” Badbaadi Gabadha, Bar Gabadha” oo looga gol-lahaa in hoos loogu dhigo tirada sii liicaysa ee gabdhaha ay muujisay natiijo tan iyo daahfurkeedii.
“Ma filayno natiijo waa barya iyo gabbal sii guduuta; maalin ama maalmo—waxay qaadanaysa muddo.” Ayay Gandhi ku tiri waraysigeedii koobaad ee fogaan-aragga tan iyo markii ay xafiiska la wareegtay May sanadii hore.
Previous: Quruxda; Midabyaleey!!
Next: Dhibanaha aan dhuuman karin ee Hindiya!!
Muuqaallo dhimrin iyo dhiirri-gelin kugu abuuraya!!